Fifindràmonina · Avrily, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Avrily, 2008
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Avrily, 2008
Amerika Avaratra 15 Avrily 2008
Nanambatra ny hery ara-politikany ny Diaspora Etiopiana any Etazonia, manomana tranonkala, fihaonana sy fampielezan-kevitra amin’ny mailaka mba handresena lahatra ireo mpiray fiaviana aminy hanohana ny fihazakazahan’i Barack Obama ho filoham-pirenena. Etiopiana maro mpitoraka blaogy no tonga namaly ny antso, nampanantena vola sy vato ho an’ny mpilatsaka Demokraty izay avy any...
Jamaika, Shina: Ny politikan'ny fanatanjahantena
Karaiba 11 Avrily 2008
“Inona moa no lazainy momba antsika raha ataontsika ho faralahim-pahamehana ny zon'olombelona fa zarantsika aza mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra mandritra ny roa herinandro? Raha tsy fantatrao izay ataon'i Shina any Tibet dia tsy mametraka antsika ho tompon'andraikitra mihitsy ve izany?”: Nifantoka tamin'ny politikan'ny lalao olaimpika ho avy io ny resak'ilay...
Kiobà: Shina – Tibet, fanehoan-kevitra
Amerika Latina 09 Avrily 2008
“Araka izay efa mety ho renao, dia nahomby ny fanembatsembanana nataon'ny mpilahatra an-dalambe, miantso ny Shina Komonista hanaja ny zon'olombelona sy hiala an'i Tibet, nandritra ny fampitana ny afo olaimpika tany amin'ireo tanàna Eoropeana lehibe.” : Nifantoka tamin'ny fanehoan-kevitry Kiobà ny Zanaky ny Revolisiona (Child of the Revolution).
Karaiba 02 Avrily 2008
Manasa ny mpihaino handanjalanja ny Ragashanti, fandaharana fiadian-kevitra malaza iray, rehefa hanaovana lohahevitra ny Karàna any Jamaika – sady nampisendaotra rahateo ny ompampanavakavahana nisesy. Noraisin’ny mamaham-bolongana Annie Paul ho adidy ny miresaka azy ity “ fa toa mikendry ny isian’ny sivana (izay nitranga) raha tsy hoe entina hanenjehana ny (fandaharana)...
Cuba: afa-miditra hoe?
Amerika Latina 02 Avrily 2008
“Eny ry zalahy sy ry zavavy, afaka ny miditra amin’izay trano fandraisam-bahiny tianareo idirana ianareo olom-pirenena tsotra eto amin’ny nosy Cuba, rehefa manam-bola vahiny matanjaka. Indrisy, izay indrindra no mandrangitra” hoy Ninety miles away….in another country,(90 maily avy eo…efa firenena hafa) raha ny (telozoro Kiobana) The Cuban Triangle indray no...